Posted by Tranquillus | Sep 12, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Sugnaanta dhaqdhaqaaqa ikhtiyaari ikhtiyaari ah ama MVS waa nidaam loo dejiyay si loogu oggolaado shaqaale inuu si ku meelgaar ah uga tago shaqadiisa si uu uga dhex shaqeeyo shirkad kale. Si kastaba ha noqotee, wuxuu hayaa suurtagalnimada inuu ku laabto booskiisa shirkadiisii ​​asalka ahayd, mudo cayiman. Shuruudaha ku xiran sugnaanta dhaqdhaqaaqa ikhtiyaariga ah, oo ka duwan fasaxa socodka, ayaa lagu faahfaahiyay Qodobka L1222 ee Xeerka Shaqaalaha. Tallaabooyinkan waxaa loogu tala galay shaqaalaha u adeegayay shirkada 2 sano oo xiriir ah iyo inkale. Waxaa lagu dabaqi karaa shirkadaha shaqaalaysiiya ugu yaraan 300 oo shaqaale ah. Haddii shaqaaluhu soo noqon waayo waqtiga lagu heshiiyey kadib, tan waxaa loo tixgelin doonaa jebinta heshiiska. Nidaamka iscasilaadu isma beddelo. Intaa waxaa dheer, ma jiri doonto ogeysiis ixtiraam.
Sida loo codsado dhaqdhaqaaq ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Guud ahaan, ma jiraan nidaamyo gaar ah oo la raaco. Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in shaqaaluhu soo gudbiyo warqad diiwaangashan oo leh ictiraaf rasiid. Loo-shaqeeyaha waajib kuma aha inuu kaga jawaabo codsiga shaqaalaha waqti cayiman gudahood. Si kastaba ha noqotee, haddii shaqaaluhu helo laba diidmo oo isdaba-joog ah, waa xaq uu u leeyahay inuu codsado tababar hoos yimaada kala-guurka xirfadeed ee CPF. Si kastaba ha noqotee, loo shaqeeyuhu kuma qasbana inuu cadeeyo sababta uu u diiday.
Haddii shirkaddu oggolaato, ka dib ayaa qandaraas la samayn doonaa. Tani waxay ka koobnaan doontaa ujeeddada, muddada iyo taariikhaha muddada dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Waxay sidoo kale ku jiri doontaa qodobbada la fiirsanayo si shaqaaluhu ugu soo noqdo meeshiisii.
Sida iska cad, loo shaqeeyaha wuu diidi karaa inuu u oggolaado shaqaalaha inuu ku laabto shaqadiisa dhammaadka muddada dhaqdhaqaaqa. Runtii, wuu awoodi karaa inuu shaqada ka ceyriyo qofka shaqaalaha ah, waa haddii uu qiil ka bixin karo sababta rasmiga ah ee shaqada looga eryay. Marka, shaqaaluhu wuxuu ka faa'iideysan doonaa caymiska shaqo la'aanta.
Hababka loo dejiyo codsi dhaqdhaqaaq ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Waa kuwan qaar ka mid ah waraaqaha codsiyada MVS ee aad la jaan qaadi karto xaaladdaada. Ha iloobin inaad sheegto sababaha kugu dhiirigelinaya inaad codsato codsigan. Waxa kale oo muhiim ah inaad kobciso rabitaankaaga caqabadaha, adigoon muujinayn xiise la'aan booskaaga hadda. Fikradda ayaa ah in lagu qanciyo loo-shaqeeyahaaga inuu ku siiyo rukhsaddan.
Magaca Dambe Magaca shaqaalaha
Shirkadda… (Magaca shirkadda)
(Magaalada), taariikhda ... (Taariikhda),
Mawduuc: Codsi Dhaqdhaqaaqa ikhtiyaari ikhtiyaari ah loo helo
Maareeyaha Kheyraadka Shaqaalaha Mr / Madam,
Aaminsanaanta shirkadaada tan iyo (taariikhda), waxaan halkaan kuusoo gudbinayaa codsigeyga dhaqdhaqaaqa iskood ah ee aaminka ah mudo (mudada ah), iyadoo la raacayo sharciga amniga shaqada (taariikhda jirta) iyo qodobka L1222- 12 ee Xeerka Shaqada.
Had iyo jeer waan jeclahay (garoonka), waxaa la joogaa waqtigii aan ku ogaan lahaa jihooyin kale si aan u horumariyo xirfadaheyga. Khibraddan cusub waxay ii noqon doontaa fursad aan si tartiib tartiib ah ugu guuleysto hamigeyga shaqsiyeed iyo kan xirfadeed.
Sannadihii aan ka shaqeynayay ururkaaga dhexdiisa, marwalba waxaan muujiyey xirfad-yaqaannimo iyo dareen mas'uuliyad mudan oo ku dayasho mudan. Had iyo jeer waxaa iga go'an inaan si sax ah u dhammaystiro dhammaan howlaha aad illaa hadda i siisay. Waxaan sidoo kale u huray awooddayda oo dhan horumarinta saxda ah ee ururka.
Aad ayaan ugu mahadnaqayaa haddii aad aqbasho codsigeyga. Waxaan weli ku jiraa howshaada oo dhan si aan ugala hadlo qaababka kala duwan ee la xiriira soo laabashadayda suurtagalka ah.
Anigoo sugaya jawaab wanaagsan, waxaan kaa codsanayaa inaad hesho, Mudane / Marwo, muujinta salaanteyda salaan.
Mawduuc: Sug amniga dhaqdhaqaaqa ikhtiyaariga ah
Mr / Marwo Agaasimaha Shaqaalaha,
Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku codsado heshiiskaaga muddo dhaqdhaqaaq nabadgelyo oo tabaruc ah (muddada la doonayo), sida ku cad Qodobka L1222-12 ee Xeerka Shaqaalaha.
Tan iyo (taariikhda soo galitaanka shirkadda), waxaan had iyo jeer xirfadahayga ku hayaa adeegga ururkaaga. Natiijooyinka wanaagsan ee aan ku siiyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay markhaati ka yihiin ka qayb qaadashadayda leexleexadka ah iyo halista aan le'ekaaday.
Si aan ugu guuleysto hadafyadeyda shaqsiyadeed iyo shaqadeyda, waxaa muhiim ii ah inaan furo fursado kale oo ku saabsan berrinka (himilooyinka). Tartankan cusub ee i sugaya ayaa ii oggolaan kara inaan waxyaabo cusub ku soo raaco ururkaaga intaan ku soo laaban karo.
Waxaan kaa codsanayaa inaad ogolaato codsigeyga. Si aan ugala hadlo shuruudaha qandaraaskeyga, waxaan ku joogayaa sidii aad u ilaalin laheyd.
Adoo rajeynaya jawaab wanaagsan inaad ka hesho, aqbal Marwo, Mudane, muujinta salaanteyda aadka u saraysa.
Moodooyinkaan waa la diidi karaa iyadoo loo eegayo astaantaada guud. Waxaa sidoo kale lagu kordhin karaa iyadoo loo eegayo rabitaankaaga iyo mashruucaaga. Maskaxda ku hay in tani aysan ahayn in la liido booska aad hadda haysato, laakiin waa in la muujiyo rabitaankaaga dhammaystirka iyo loolanka. Abaabul fikradahaaga si wanaagsan si looga fogaado rarka xad dhaafka ah ee warqaddaada.
Talaabooyinka lagu helo Dhaqdhaqaaqa Tabarucaada Sugan
Sida kor lagu sheegay, ma jiro qaab gaar ah oo loo maro noocan ah codsigan. Qofka shaqaalaha ah wuxuu u baahan yahay oo keliya inuu qoro warqad uu ku qirayo risiidhkiisa. Xaqiiqdii, gudbinta codsiga qoraal ahaan waa dammaanad qaadka raadinta. Kadib, waxa kaliya ee haray waa in jawaab laga sugo loo shaqeeyaha. Muddada dhaqdhaqaaqa is-xilqaan ee aaminka ah waa qodob ay si buuxda uga wada hadleen labada dhinac.
Waxa ugu muhiimsani waa inaad warqad fiican ka taxadarto oo aad doodo adag gasho si loo shaqeeyuhu si buuxda ugu qanco.
Hadda waxaa suurtagal ah inaad ka tagto shirkadda aad hadda u shaqeysid mid kale, iyadoo la hubinayo inaad dib u soo laaban karto haddii ay wax u socdaan sidii loogu talagalay! Codsiga dhaqdhaqaaqa isxilqaan ee aaminka ah, waxaad ka faa'iideysaneysaa xorriyad iyo nabadgelyo badan. Waa beddelka xiisaha leh ee iscasilaadda.
Baahida dhaqdhaqaaqa amniga ikhtiyaariga ah ayaa sidoo kale yareyneysa halista shaqo la'aanta. Waa hab lagu helo ikhtiyaar labaad oo xusulka hoostiisa ah. Qalabka noocan ah sidoo kale wuxuu faa'iido u yeelan karaa shirkad, maaddaama ay u oggolaanayso in la sii daayo boos iyada oo aan lumin qayb wanaagsan oo ururka ka mid ah.
Soo deji "Samee warqad codsi ah tusaale Dhaqdhaqaaq Iskaa Wax u qabso ah oo sugan 1"	samee-xaraf-codsi-is-xilqaan-celin-dhaqdhaqaaq-tusaale-1.docx - La soo dejiyay 429 jeer - 20 KB
Soo deji "Samee warqad codsi ah tusaale Dhaqdhaqaaq Iskaa Wax u qabso ah oo sugan 2"	samee-xaraf-codsi-is-xilqaan-celin-dhaqdhaqaaq-tusaale-2.docx - La soo dejiyay 427 jeer - 20 KB
Samee warqad codsi ah Dhaqdhaqaaqa ikhtiyaari ikhtiyaari ah Febraayo 13, 2022Tranquillus
horeU daa bilow bilowga ganacsiga, warqad codsi bilaash ah
socdaWaraaqda xisaabta keydinta waqtiga si aad u soo dejiso